6 Qalabka Midabka Muhiimka u ah Naqshadayaasha | Abuurista khadka tooska ah
Qofna war uma aha inuu isagu yahay duqeynta alaabta, boorar, bannaanka, pop-up iyo noocyo kala duwan oo dacaayad ah, waxay sii kordheysaa loolanka u dhexeeya shirkadaha iyo sidaas awgeed, shaqada naqshadeeye, oo lacag lagu siiyo si loo abuuro qaybo jajabiya oo soo jiita dareenka macaamiisha.
Maxaa mudan highlight waa midab, dhinac saamayn ku leh waqtiga doorashada, iyo sidoo kale doorashada qaabka, astaamaha, qaab qoraalka. Taasi waa in la yiraahdo, mashruuca dhib malahan, midabku wuxuu saameyn ku yeelan karaa sida dadku u turjumaan shaqadaada.
Laakiin waxaan dhihi karaa in midabku xoogaa shakhsiyan yahay, maadaama isku midabku kicin karo noocyada iyo falcelinta kala duwan ee dadka kala duwan, mararka qaarkood doorbid shaqsiyeed, marna sababo dhaqameed awgood.
Waxaa jira qalab badan oo internetka ah oo internetka ah oo mararka qaarkood aanan garanayn midka aan adeegsaneyno, sax?
Sidaas ayaan ku kala tagay qalabka midabka qaybta taas oo aan ka helo waxtar iyo waxtar badan (palette, Xulashada aragtida midabka, CSS).
1 Qalabka Midabka: Palette Midabka
1.3 Sawir la'aan
2 Qalabka xulashada midabka
2.2 Magacyada Midabka CSS
3 Qalabka Aragtida Midabka
3.1 Naqshadeeyaha Nidaamka Midabka
Qalabka Midabka: Palette Midabka
Haddii aad naqshad ka bilaabayso xoqid, adiga oo aan dhiirrigelin ama aanad lahayn hagaajinno aad raacdo, waxay noqon kartaa mid aad u dhib badan hagaaji nidaam midab leh oo shaqeynaya. Taasi waa sababta aan u soo jeedin doonno xoogaa qalab ah oo kaa caawin doona inaad qeexdo isku-darka midabka wanaagsan ee shaqadaada.
ColourLovers ayaa hoy u ah milyan oo midabbo midab leh oo ay soo saareen adeegsadayaashu. Raadi aruurinta waxaadna heli kartaa midka ku dhiirrigeliya ama raadsada midab oo aad ka doorataa suurtogalkaaga isku-darka horay loo qorsheeyay.
Kuler waa a qalab Adobe awood badan taas oo kuu ogolaaneysa inaad sahamiso oo aad qiimeyso midabada jira ee lagu kala soocay mowduucyada, marka laga reebo sidoo kale kuu ogolaanaya inaad sameysato palette kuu gaar ah oo xoq ah.
Ma waxaad ku raadineysaa shucuur gaar ah, qaab ama jawi midabka midabkaaga ah? Kadib boggan adiga ayaa loogu talagalay adiga, tan iyo Sawirka waa qalab caqli badan taas oo u oggolaanaysa xulashada midabada sawirka lagu rakibo websaydhka laftiisa.
Qalabka xulashada midabka
Qalabkani waa mid fudud, laakiin si aan caadi ahayn waxtar u leh waxaana loo yaqaan 'Colordot', oo ah aalad wuxuu kuu ogolaanayaa inaad iskaaniso daaqada biraawsarka leh midabka saxda ah ka dibna nuqul lambarka hex hal guji.
Magacyada Midabka CSS
Haddii magacyada midabka aan kala sooca lahayn aysan dhadhamin, laga yaabee liiskan 147 magacyada midabka sharaxaadda leh way fududaan kartaa in la xasuusto. Waxaad ku daawan kartaa xulashada oo dhan ama waxaad ku arki kartaa midab aan kala sooc lahayn adigoo gujinaya jiirka.
Qalabka Aragtida Midabka
Xusuusnow giraanta midabka, analogga, triassic, iyo midabada isugeynaysa ee fasalka farshaxanka? Aragtida waad ku dhaqmi kartaa adigoo kaashanaya kuwan qalabka midabka si cilmiyaysan loo cadeeyay.
Naqshadaynta nidaamka midabkaaga ayaa suurtagal ah, waa inaad u leexataa oo aad u hagaajisaa shaagagga midabka dooro midabka salkaWaxaad markaa arki doontaa qiimayaasha si otomaatig ah loo soo saaray iyadoo lagu saleynayo nooca palette-kaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Waraaqaha midabaynta » 6 qalab midab muhiim u ah naqshadeeyayaasha
Naqshad u samee suuqa oo qiimo ku iibso
Sidee wax u naqshadeeysaa Ma gacan mise mishiin?